Mateo 20:20-34 NA-TWI | Biblica
Mateo 20:20-34 NA-TWI
Sebedeo mma Yakobo ne Yohane ne wɔn na baa Yesu nkyɛn. Ɔbea yi de adesrɛde bi bɛtoo Yesu anim.
Yesu bisaa no se, “Dɛn na wopɛ sɛ menyɛ mma wo?” Obuaa no se, “Mepɛ sɛ, sɛ wokɔ w’ahenni mu a, me mma baanu yi mu baako tena wo nifa so, na ɔbaako nso tena wo benkum so.”
Nanso Yesu ka kyerɛɛ no se, “Wunnim nea worebisa no.” Afei, ɔdanee ne ho bisaa Yakobo ne Yohane se, “Mubetumi anom kuruwa a merebɛnom ano no bi anaa?” Wobuaa no se, “Yebetumi!”
Yesu ka kyerɛɛ wɔn se, “Me kuruwa ano de, mubetumi anom, nanso, minni tumi sɛ miyi wɔn a wɔbɛtena me nifa anaa me benkum so. Saa afa no wɔ hɔ ma wɔn a m’agya ayi wɔn no.”
Asuafo du a aka no tee nea Yakobo ne Yohane akobisa no, wɔn bo fuwii.
Yesu frɛɛ wɔn nyinaa ka kyerɛɛ wɔn se, “Munim sɛ ahene ne atumfo di wɔn a wɔhyɛ wɔn ase no so. Saa ara nso na wɔn a wodi wɔn so no nso, di afoforo so. Nanso, mo de, ɛnte saa wɔ mo mu. Mmom, obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ kɛse wɔ mo mu no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ mo somfo. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ ne nuanom so panyin a, ɛsɛ sɛ ɔsom wɔn sɛ akoa. Monhwɛ me, na munsua me. Me a meyɛ Agyenkwa no, mamma sɛ wɔnsom me, na mmom, mebɛsomee, na mede me kra ato hɔ ama nnipa bebree.”
Yesu ne n’asuafo fi Yeriko rekɔ no, nnipadɔm tu dii wɔn akyi.
Wɔrekɔ no, wɔkɔfaa baabi a anifuraefo baanu bi tetee. Anifuraefo yi tee sɛ Yesu retwam no, wɔteɛteɛɛm se, “Awurade, Dawid Ba, hu yɛn mmɔbɔ!”
Nnipadɔm a wodi Yesu akyi no teɛteɛɛ wɔn se wommua wɔn ano. Nanso anifuraefo no kɔɔ so teɛteɛɛm se, “Awurade, Dawid Ba, hu yɛn mmɔbɔ!”
Yesu duu nea wɔtetee hɔ no, ogyina bisaa wɔn se, “Dɛn na mopɛ sɛ meyɛ ma mo?”
Wɔka kyerɛɛ no se, “Awurade, yɛpɛ sɛ yehu ade!”
Anifuraefo no yɛɛ Yesu mmɔbɔ. Ɔde ne nsa kekaa wɔn ani, na prɛko pɛ, wohuu ade, na wodii n’akyi.
Read More of Mateo 20